Vokatra namboarina ho an'ny mpanjifa any ivelany (nalefa tamin'ny orinasam-barotra vahiny)
Famoronana firafitra: lamba tsy tenona, hydrogel, sarimihetsika perla.
Mampihena ny edema ôtra (azo ampiharina amin'ny areti-maso amin'ny fanafody fanatoranana amin'ny fandidiana), izy io dia ampiasaina hifikitra eo ivelan'ny mason'ny marary mihinana fanatoranana ankapobeny na marary tsy mahatsiaro tena mba hanomezana marary amin'ny faritra somary nakatona sy mando hisorohana ny fihenan'ny keratitis. na manala reraka ny maso.
Raha ampitahaina amin'ny vokatra mitovy amin'izany eny an-tsena, ity vokatra entin'ny orinasa ity dia mampiasa fitaovana japoney + teknolojia matotra ary ambany ny tahan'ny allergy.
● Ny maso mangatsiaka sy malefaka ary Gel tsy miovaova dia mampihena ny fisehoan'ny maso matevina sy reraka.
● Manalefaka ketrona sy masonkoditra. Mamelombelona endrika reraka.
● Mampihena ny fivontosana sy ny mangana.
● Manamaivana ny aretin'andoha, fanamaivanana amin'ny sinus voadio noho ny sery, ny allergy, chalazion, chalazia.
● Mamelombelona ny maso ho an'ny olona tsy natory, nanao fety mandritra ny alina.
Safidy mety ampiasaina amin'ny fonosana ranomandry mitete na lamba firakotra mafana ary lamba famaohana, ny maso masom-bolo azo ampiasaina ary azo ampiasaina indray dia tsy mitovy amin'ny tsindry mangatsiaka hafa eny an-tsena miaraka amin'ny endriny somary malefaka mamela ny famatrarana hifanaraka amin'ny endrik'ilay masonao. . Ny maha-compresse azy dia maivana sy manify tokoa, toy ny hoditra faharoa izy io ary mitazona tsindry kely. Tsy toy ny famatrarana hafa izay mety mitete, tsy mifikitra izy ary mando fotsiny - fa tsy mando. Vita avy amin'ny hydrogel ary tonga amina fonosana tsy misy fangarony, ny Saron-tava dia azo ampiasaina amin'ny faritry ny maso hanaovana fitsaboana mangatsiaka hampihenana ny fivontosana sy ny tsy fahazoana aina aorian'ny fandidiana, hampihena ny fotoana fanasitranana ary hahafahan'ny marary miverina haingana amin'ny asany mahazatra. Ny famatrarana dia azo ampiasaina hanatsarana ny fanaonao isan'andro amin'ny hatsaranao amin'ny alàlan'ny fanamaivanana ny maso reraka na mivonto, manalefaka ketrona sy pores, ary mamelombelona endrika vizana. Ny masony soisa koa dia afaka manampy amin'ny fanalefahana ny aretin'andoha, havizanana ary ampiasaina amin'ny fialan-tsasatra ankapobeny. Ny fampiharana eo noho eo ny fitsaboana ny sery mangatsiaka dia mahasoa amin'ny fampihenana ny fivontosana aorian'ny fandidiana ny lalan'ny capillary ary hampihena ny fikorianan'ny rà sy ny tsiranoka hafa mankany amin'ny faritra maratra na miasa. Ny marary koa dia mahazo tombony amin'ny vokatry ny fanatoranana fitsaboana mangatsiaka amin'ny hozatra, izay manampy amin'ny fampihenana ny fahatsapana fanaintainana ary manome fahatsapana mampitony, mamelombelona ary miala sasatra amin'ny faritra maratra na miasa. Ankoatr'izay, ny fitsaboana mangatsiaka dia mampihena ny loza ateraky ny fananganana hematoma. Satria ny fitsaboana mangatsiaka dia manampy amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny tanjaka, ny fivezivezena ary ny fivezivezena haingana kokoa, ny marary dia mety hampihena ny fijanonany any amin'ny hopitaly, hanasitrana haingana ary hahatsapa ho maika kokoa. Ity Compress ity azo ampiasaina indray dia manome fanamaivanana mangatsiaka hatramin'ny 15-20 minitra. Amin'ny fitehirizana vata fampangatsiahana tsotra eo anelanelan'ny fampiasana azy, ity famatrarana maso azo ampiasaina ity dia azo ampiharina hatrany hatrany amin'ny fitsaboana mangatsiaka.
Ny saron-tava maso mangatsiaka ataon'ny orinasa dia mampiasa làlana teknika isan-karazany mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpanjifa isan-karazany. Ho an'ireo vokatra ampiasaina amin'ny sehatry ny fitsaboana (tsy misy fanatoranana amin'ny fandidiana), dia azo ampiasaina ny rafitra hydrogel sodium polyacrylate. Ny vidin'ny singa amin'ity karazana hydrogel ity dia ambany ary matotra ny làlan'ny fizotrany.
Ny saron-tava maso mangatsiaka ho an'ny fanatoranana fandidiana dia mila hydrogels cytotoxicity ambany. Raha manana izany fepetra izany ianao, dia mifandraisa aminay raha mila tatitra momba ny fitsapana cytotoxicity.
Teo aloha: Firaikitra ketrona tsy voatenona vozona
Manaraka: Patch tsy misy tenona
Saron-tava Collagen Crystal Eye
Sarontava amin'ny takelaka
Hydrogel ambanin'ny sarontava-maso
Ny fanafody nentim-paharazana fanafody fitsaboana sinoa